देशभर औषधि र खोप अभाव | NiD - News
दीपक दाहाल, नागरिक दैनिक, १९ चैत्र २०७४
यस्तो थियो खेल
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा र सचिव डा. पुष्पा चौधरीले तत्कालीन महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई पुस २९ मा हटाएर सेवा समूह नै नमिल्ने कनिष्ट डा. तारा पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध डा. पन्त अदालत गए । अदालतले डा. पन्तको सरुवा बदर गरी नियमअनुसार महानिर्देशक नियुक्तिको आदेश दिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा महानिर्देशक १२ औं तह (सचिव) हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघिका मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्मै नलगी कामु दिएर महानिर्देशक नियुक्ति गर्दै आएका थिए।
अदालतबाट आदेश दिएको १० दिनपछि मन्त्रालयले डा. पन्तलाई पुनर्बहालीको पत्र दिएको थियो। डा. पन्तले पुनः जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो दिन फागुन २ गते मन्त्री बोहोराले अवकाश पाउन १० दिन बाँकी रहेका १२ आंै तहका डा. विनोदमान श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइदिएका थिए।
अवकाश हुनै लागेका कर्मचारीलाई नियम भत्काउनकै लागि १० दिने महानिर्देशक बनाइएको भन्दै डा. श्रेष्ठ हाजिर हुन जानै मानेनन्। महानिर्देशकका रुपमा ७ दिनका लागि विदेश जाने कार्यक्रममा मनोनयनमा परेपछि उनले फागुन ११ मा पदबहाली गरेका थिए।
फागुन २१ मा उनले अनिवार्य अवकाश पाएसँगै विभाग महानिर्देशकविहीन बनेको छ। नयाँ महानिर्देशकले पदबहाली गर्न नमान्दा त्यतिबेला पनि नौ दिन महानिर्देशकविहीन बनेको विभाग डा. श्रेष्ठ विदेश गएसँगै थप सात दिन नेतृत्वविहीन बनेको थियो।
यसबीचमा नयाँ सरकार बन्यो र पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत महानिर्देशक नियुक्तिमा ध्यान पु-याएनन्।
विभागमा उपमहानिर्देशकसमेत भए पनि मन्त्रालयले आर्थिक अधिकारी दिन अटेरी गरेको थियो। स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले उपमहानिर्देशक वा अन्य कसैलाई काम दिएर आर्थिक अधिकार दिन सकिने भए पनि त्यसमा समेत अवरोध गरेकी थिइन्। अन्य मन्त्रालय विभागमा कामुलाई समेत आर्थिक अधिकार दिने प्रचलन भए पनि स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि आर्थिक अधिकार महानिर्देशक÷कामुलाई मात्रै दिने गरिएको छ। चौधरीले हाल विभागमा सम्झौताका क्रममा रहेका टेन्डर र भुक्तानीको ‘भाग खोजेरै’ अड्काएको विभाग स्रोतको भनाइ छ। पछिल्लोपटक विभागका महानिर्देशकले एक अर्ब हाराहारीको टेन्डर सम्झौता स्वीकृत हुन र भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
राज्यमन्त्री अर्यालले जिम्मेवारी नपाएको भन्दै केही गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। बिहीबार पूर्ण जिम्मेवारी पाएसँगै अर्यालले नयाँ महानिर्देशक नियुक्तिबारे छलफल थालेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। ऐनअनुसार महानिर्देशकको पूर्ण नियुक्ति १२ तह (सचिव) सरहका चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्छ। एघारौं तह (सहसचिव) सरहलाई दिँदा वरिष्ठलाई कामुको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम हेर्ने ६ वटा महाशाखा, तीनवटा केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट समेत हुने सम्पूर्ण खरिद सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने लाभमा पकड बनाउन महानिर्देशक नियुक्तिमा चलखेल हुनेगर्छ।